တပျကို မငျးအဖမှေတျနလေား ၊ –မသားတှေ” ဆိုသညျ့ စဈဗိုလျ ၏ …. မိုးမှနျနေ(ရုပျ/သံ) – Yarsuthit
တပျကို မငျးအဖမှေတျနလေား ၊ –မသားတှေ” ဆိုသညျ့ စဈဗိုလျ ၏ …. မိုးမှနျနေ(ရုပျ/သံ)
“—–မသားတှေ ၊ တပျကို မငျး အဖေ မှတျနလေား ၊ ——မသားတှေ” ဆိုသညျ့ စဈဗိုလျ၏ ဆဲဆိုသံ မိုးမှနျနသေော ဧညျ့စာရငျး စဈသညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ အှနျလိုငျးပျေါတှငျ ပွနျ့နှံ့နပွေီး ပွညျသူမြား ဝဖေနျမှု မွငျ့တကျ(ရုပျ/သံ)
အကွမျးဖကျစဈကောငျစီတပျမြားက ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနမှေ့စတငျ၍ အာဏာသိမျးပွီးနောကျ ပွညျသူကို သတျဖွတျခွငျး၊ ဆဲဆိုခွငျးနှငျ့ ဥပဒမေဲ့ နိုငျထကျစီးနငျး ဆကျဆံမှုမြား လုပျဆောငျလကျြရှိကွောငျး ပွညျတှငျးမှ ပွညျသူမြားက ပွောဆိုကွသညျ။
လကျရှိတှငျ လူမှုကှနျရကျတှငျ အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့ ညပိုငျး အကွမျးဖကျစဈတပျက တညျးခိုခနျးတဈခုကို ဝငျရောကျစဈဆေးရငျး တညျးခိုခနျးမှ ဝနျထမျးမြားကို ဆဲဆို ခွိမျးခွောကျနသေော ဗီဒီယိုဖိုငျတဈခုမှာ ပွနျ့နှံ့နလေကျြရှိပွီး ယငျးသို့ ပွညျသူကို ပွောဆို ဆကျဆံမှုမြားမှာ ရနျကုနျ၊ မန်တလေး အပါအဝငျ တဈနိုငျငံလုံး ပွညျသူမြား ကွုံတှနေ့ရေသော အခွအေနေ ဖွဈကွောငျး ရနျကုနျပွညျသူတခြို့က ဆိုကွသညျ။
“စဈတပျ ဗိုလျတှရေော စဈသား ရဲ အကုနျလုံး ပွညျသူကို ဆဲဆို ဆကျဆံနကွေတာပဲ။ လကျနကျအားကိုးနဲ့ပေါ့။ ပွညျသူက လကျနကျမရှိ​တော့ ငွိမျခံရတာပဲ။ မလုံခွုံဘူး။ အခု စဉျးစားမိတာက နိုငျငံ ခွားထှကျမယျ။ သူတို့နဲ့ဝေးရာ နမေယျ အဲဒါပဲ စဉျးစားမိတော့တယျ။ သူတို့လို အရိုငျးအစိုငျးတှနေဲ့တော့ တကယျ မနခေငျြတော့ဘူး” ဟု ရနျကုနျ၊ ဂပြနျစာသငျတနျးကြောငျး ဆရာတဈဦးက ပွောသညျ။
လူမှုကှနျရကျတှငျ ပွနျ့နှံ့နသေော အလှနျရိုငျးစိုငျးစှာ ဆကျဆံပွောဆိုသညျ့ စဈတပျအရာရှိ၏ ဆဲဆိုသံ မိုးမှနျနသေော ဗီဒီယိုကို ရနျကုနျခတျေသဈအနေ ဖွငျ့ ပွနျလညျ ဝမြှေလိုကျပါသညျ။
“—–မသားတွေ ၊ တပ်ကို မင်း အဖေ မှတ်နေလား ၊ ——မသားတွေ” ဆိုသည့် စစ်ဗိုလ်၏ ဆဲဆိုသံ မိုးမွှန်နေသော ဧည့်စာရင်း စစ်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြန့်နှံ့နေပြီး ပြည်သူများ ဝေဖန်မှု မြင့်တက်(ရုပ်/သံ)
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်းနှင့် ဥပဒေမဲ့ နိုင်ထက်စီးနင်း ဆက်ဆံမှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းမှ ပြည်သူများက ပြောဆိုကြသည်။
လက်ရှိတွင် လူမှုကွန်ရက်တွင် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ ညပိုင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က တည်းခိုခန်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရင်း တည်းခိုခန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို ဆဲဆို ခြိမ်းခြောက်နေသော ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာ ပြန့်နှံ့နေလျက်ရှိပြီး ယင်းသို့ ပြည်သူကို ပြောဆို ဆက်ဆံမှုများမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည်သူများ ကြုံတွေ့နေရသော အခြေအနေ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူတချို့က ဆိုကြသည်။
“စစ်တပ် ဗိုလ်တွေရော စစ်သား ရဲ အကုန်လုံး ပြည်သူကို ဆဲဆို ဆက်ဆံနေကြတာပဲ။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ပေါ့။ ပြည်သူက လက်နက်မရှိ​တော့ ငြိမ်ခံရတာပဲ။ မလုံခြုံဘူး။ အခု စဉ်းစားမိတာက နိုင်ငံ ခြားထွက်မယ်။ သူတို့နဲ့ဝေးရာ နေမယ် အဲဒါပဲ စဉ်းစားမိတော့တယ်။ သူတို့လို အရိုင်းအစိုင်းတွေနဲ့တော့ တကယ် မနေချင်တော့ဘူး” ဟု ရန်ကုန်၊ ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်း ဆရာတစ်ဦးက ပြောသည်။
လူမှုကွန်ရက်တွင် ပြန့်နှံ့နေသော အလွန်ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုသည့် စစ်တပ်အရာရှိ၏ ဆဲဆိုသံ မိုးမွှန်နေသော ဗီဒီယိုကို ရန်ကုန်ခေတ်သစ်အနေ ဖြင့် ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါသည်။